कमेडी च्याम्पियनको ग्रान्ड फिनाले आज, भरतमणि, बिक्की र सन्तोषमा को बन्ला च्याम्पियन ? - PokhareliNews
Home/मनोरञ्जन/कमेडी च्याम्पियनको ग्रान्ड फिनाले आज, भरतमणि, बिक्की र सन्तोषमा को बन्ला च्याम्पियन ?
काठमाडौं । कमेडी च्याम्पियन सिजन–२ को ग्रान्ड फिनाले शनिबार साँझ हुँदै छ । साँझ ९ बजेबाट ग्रान्ड फिनालेको कार्यक्रम सुरु हुनेछ ।
फाइनलमा भरतमणि पौडेल, बिक्की अग्रवाल र सन्तोष थापा पुगेका छन् । उत्कृष्ट ४ को प्रस्तुतिका क्रममा सहभागी विक्की अग्रवालले प्रस्तुत गरेको ‘पेन्टोमाइम’ र अर्का प्रतिस्पर्धी भरतमणी पौडेलले प्रस्तुत गरेको पूर्व यूवराज पारस शाहको अभिनयले भने शोको चर्चालाई बढाइदियो ।
विक्कीको प्रस्तुतिमा निर्णायक सन्तोष पन्तले दिएको प्रतिक्रियाले आलोचना पनि बटुल्यो । अर्का प्रतिस्पर्धी सन्तोष थापाले भरतमणि र बिक्कीाप्रति दर्शकको लोभलाग्दो क्रेजेको चेपुवामा पर्दाको व्यङ्ग्यात्मक पीडालाई प्रस्तुतिको विषय बनाएका थिए । सन्तोषको यो प्रस्तुतिलाई निर्णायकले मन पराएका थिए । आफैंप्रति गरेको व्यङ्ग्यले उनीप्रति दर्शकको सहानुभूति प्रकट हुन सक्छ । जसले गर्दा अघिल्ला श्रृंखलाको अनुपातमा दर्शकको भोट उनलाई बढेको हुन सक्छ ।